Daawo: Jaaliyadda Soomaliyeed ee UK oo Magaalada London ku qabtay Bandhig Dhaqmeedkii Sanadlaha ahaa ee Hidaha iyo Dhaqanka Soomalida | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Jaaliyadda Soomaliyeed ee UK oo Magaalada London ku qabtay Bandhig Dhaqmeedkii Sanadlaha ahaa ee Hidaha iyo Dhaqanka Soomalida
Sunday October 23, 2016 - 3:43 under Somali News by Tifaftiraha K24
Bandhig dhaqmeed ku saabsan Hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayna ka qeybgaleen Jaaliyadda Somalida eek u dhaqan Dalka ingiriiska ayaa lagu qabtay Magalada London ee Wadankaasi.
Barnaamijkan Bandhig faneedka ah oo ah mid sanadkiiba hal mar lagu qabto Dalkan ingririiska, ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Dalkaasi waxay ku soo bandhigeen hiddaha iyo Dhaqanka Soomaalida, iyadoo Bandhigan uu sanadkan xambaarsanaa muhiimad gooni ah, waxaana markii ugu horaysay lagu daah furay xarunta lagu kaydiyo dhaqanka iyo xadaarada faca weyn leh ee Boqortooyada British Museum ee Magaalada London.
Barnaamijkaasi waxaa furitaankiisii khudbado ka jeediyey Mas’uuliyiin ka tirsan Dalka Britain iyo Prof: Ahmed Ismaaciil Samatar oo ku dheeraaday taariikhda faca weyn leh ee ku duugan gabayada iyo fanka Soomaalida.
Sanad walba barnaamijkan bandhig dhamaeedka ayaa waxaa ka qayb gala fanaaniin kale duwan oo ka kala yimid daafaha Caalamka, iyadoo sanadkan uu goob joog ka ahaa Ahmed-naaji Sacad oo ka mid ah fanaaniinti hore ee Dalkeenna.
Dhanka kale furitaanka barnaamijkani waxaa ka qeybgalay Dadwane farabadan, oo aad ula dhacsanaa inay arkaan hidaha iyo dhaqanka Soomaalida.